Software Billgba :gwọ: Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ya | Site na Linux
Ego ịgba ụgwọ: ihe ị chọrọ ịma
Isaac | | Aplicaciones
La ịnyepụta na ịdenye akwụkwọ ọnụahịa Ọ bụ ọrụ a na-eme ugboro ugboro na nnukwu ụlọ ọrụ, SMEs yana maka ndị ọrụ aka ha. Ọrụ a anaghị ekelekarị onye njikwa na-arụ ya, na mgbakwunye na iwepụta oge itinye ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ngwanrọ ịgba ụgwọ nwere ike inyere ha niile aka.
Ọzọkwa, dị ka onye ọ bụla, ị nwere ike ihie ụzọ na akwụkwọ ọnụahịa ụfọdụ. Nke ahụ pụtara na ị ga-eme studs, na-ege ntị mgbe niile na ọnụọgụ nke akwụkwọ ọnụahịa iji soro, na-echekwa ma akwụ ụgwọ ya ma ọ bụ na ọ bụghị, wdg. Enwere ike iji aka ma ọ bụ mebie ihe a niile site na ngwanrọ ịgba ụgwọ a. Ihe niile dị mfe dị ka nbudata mmemme ma ọ bụ ngwa na PC ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị ma nyere gị aka na nnukwu ibu a ...
1 Gịnị bụ mmemme ịgba ụgwọ?
2 Ofdị sọftụwia ịgba ụgwọ
3 Mmemme ịgba ụgwọ kacha mma
Gịnị bụ mmemme ịgba ụgwọ?
Un ịgba ụgwọ software ọ bụ usoro ihe omume kọmputa iji jikwaa ma jikwaa ntinye na nnata nke akwụkwọ ọnụahịa maka ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ. Ọ nwere ike ịbụ nnukwu ngwá ọrụ maka freelancers na ụlọ ọrụ.
na atụmatụ na sọftụwia ịgba ụgwọ niile kwesịrị ịnwe bụ:
Ike maka Nọmba na-esochi nke akwụkwọ ọnụahịa ndị enyere na njikwa ụbọchị.
Akwụkwọ ọnụahịa ndebiri dị njikere iji zuo ezu.
Nsonye nke logos na data ụlọ ọrụ ma ọ bụ iji aka ọrụ.
Ekwe omume nke na-ahọpụta dị iche iche ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Ike nke njikwa faili nke ndị ahịa na ndị na-ebubata ya. Na data dịka aha, aha ụlọ ọrụ, NIF / CIF, adreesị, kọntaktị, wdg.
Editor bụrụ na ị chọrọ gbanwee ihe ọ bụla data nke a nchicha nke akwụkwọ ọnụahịa tupu akwado ya.
Nhọrọ nke ụdị nke ụtụ (Ụtụ ego nke onwe, VAT, ...) na ikike ịgbakọ ego ole.
Dashboard na eserese na-egosi nhazi nke mmefu na ego.
Sistemụ nke nkwuputa mgbe ụfọdụ.
Ọrụ iji nyefee akwụkwọ ọnụahịa proforma na mmefu ego.
N'ọnọdụ ụfọdụ o nwekwara nchekwa data / burukwa soro ndị ahịa na data ụtụ ha mee ka imepụta akwụkwọ ọnụahịa dị mfe.
Ofdị sọftụwia ịgba ụgwọ
N'ime ngwanrọ ahụ invoising nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị nwere ike ịchọta ụdị dị iche iche. Kwesịrị ịmara ha nke ọma iji họrọ nhọrọ kachasị mma maka gị:
Online- Ndị a bụ web-dabeere ịgba ụgwọ mmemme na-adịghị mkpa iji wụnye ihe ọ bụla. Enwere ike iji ha site na ngwaọrụ ọ bụla yana ihe nchọgharị weebụ dakọtara. Uru nke sistemụ a bụ na ha ga-adị mgbe niile site na ebe ọ bụla (ebe sava gị na-arụ ọrụ) ma ị gaghị adabere na ngwaọrụ akọwapụtara maka ya. Na mgbakwunye, ịnọ n'igwe ojii, a ga-echekwa data ahụ kpamkpam, na-enweghị nchegbu gbasara nkwado ndabere, wdg.
Obodo: a software ịgba ụgwọ software bụ otu na-arụnyere na gị onwe gị na PC ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Agbanyeghị na ọrụ ịntanetị nwere ezigbo nchekwa ma ezoro ezo, ụfọdụ nche freaks nwere ike ịchọ ịnweta data ndị ahịa niile na mpaghara maka nchekwa ka ukwuu. N'ezie ọ bụ naanị uru mmemme ndị a nwere. Ihe ndị ọzọ bụ ọghọm ma e jiri ya tụnyere ntanetị, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ihe emee na ngwaọrụ gị, draịvụ ike gị na-adaba, ransomware na-emetụta gị, wdg.
Na mgbakwunye na edemede ndị a, enwere ike kewaa ha n'ụdị ndị ọzọ dị ka akụkụ ndị ọzọ si dị. Iji maa atụ, ịnwere ike ịnwe sọftụwia ịgba ụgwọ n'efu na nke mepere emepe ma ọ bụ nke nwere ikike, wdg. Anyị nwedịrị ike ikewapụ ndị ọrụ akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam. Na mkpokọta, otu n'ime ihe ndị a anaghị eme ka usoro ịgba ụgwọ dị mma ma ọ bụ ka njọ.
Nke ahụ bụ, enwere free emeghe-isi iyi ịgba ụgwọ software Ọ nwere obere ihe nwere anyaụfụ na ebe ọzọ akwụ ụgwọ ma mechie. Ya mere, ejila ihe ndị a dị ka ihe dị mma dị ka ụfọdụ na-ekwu na isi mmalite dị njọ karịa ikike ... Nke a bụ nnukwu ndudue!
Mmemme ịgba ụgwọ kacha mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ aro Banyere ngwanrọ ịgba ụgwọ kachasị mma ị nwere ike ịchọta, ebe a bụ ndepụta ebe ị nwere ike ịhụ ụfọdụ nhọrọ kacha mma dịịrị gị:
Akwụkwọ ọnụahịa: ọ na-enye ọtụtụ mgbanwe, ebe ọ na-enye ohere ịwụnye mpaghara na PC, jiri web hosting iji kwado ngwaọrụ a, yana n'okpuru ụdị SaaS n'igwe ojii site na sava nke ya dị ka ọrụ. Na nke a ọ bụ free software ngwọta. Ọ dị ike ma anaghị akwụsị ito ekele na obodo na plugins na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ. Na mgbakwunye na ijikwa akwụkwọ ọnụahịa, enwere ike ịgbakwunye ọrụ iji nwee CRM ma ọ bụ ERP zuru oke.
Ezigbo: DelSol Software ewepụtala ezigbo sọftụwia ịgba ụgwọ a maka ijikwa njikwa azụmaahịa niile nke ụlọ ọrụ ahụ, ahịa na ịzụrụ ihe. I nwedịrị ike ịchịkwa karịa nke ahụ maka ọrụ ya iji jikwaa ngwaahịa na ngwaahịa ngwaahịa. Ọzọkwa, ọ dịghị mkpa nha ụlọ ọrụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-arụrụ onwe gị. N'aka nke ọzọ, ọ nwere nnukwu uru ọzọ, ọ bụkwa ntinye ya na ụlọ ọrụ MS Office. Ọ bụ kpam kpam n'efu, mana ọ bụ naanị maka Windows maka ntinye mpaghara, ọ bụ ezie na enwere ike iji ya na ntanetị site na sistemụ ọ bụla ekele maka igwe ojii ya.
Quipu: sọftụwia ịgba ụgwọ ngwanrọ dị mfe ma kensinammuo nke emebere maka freelancers na SMEs. Ọ na-enye ohere ịmepụta akwụkwọ ọnụahịa na mmefu ego nke onwe, megharia azụmahịa ụlọ akụ echekwara, mepụta ego, gbanye ụtụ isi, wdg. Na-arụ ọrụ OCR iji mata ederede na igwefoto nke ekwentị gị. Also nwekwara ya maka ngwaọrụ mkpanaka na Google Play maka gam akporo ma ọ bụ iji igwe ojii.
Onye ji ụgwọ: ọ bụ otu n'ime ọrụ igwe ojii kachasị ewu ewu. Ọ dị mfe ma na-enye gị ohere ịrụ ọrụ nke ọma. Site na ndebiri ndebiri ahaziri ahazi, teknụzụ OCR iji mata ederede site na igwefoto, akụkọ na itule, wdg. N'okwu a, a na-akwụ ụgwọ ya, yana atụmatụ ịkwụ ụgwọ maka ihe ruru akwụkwọ 100 kwa afọ nke € 4 / ọnwa, atụmatụ nkezi nke ihe ruru akwụkwọ ọnụahịa 800 kwa afọ maka € 12 / ọnwa yana atụmatụ na-akparaghị ókè maka € 24 / ọnwa. Ọ nwekwara ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Agbatị: Ọrụ ntanetị iji nye ma jikwaa akwụkwọ ọnụahịa gị ọsọ ọsọ na mfe. O nwere ndebiri, ọrụ iji dekọọ awa, ọgbọ nke eserese na ndekọ, na-enye ohere ijikọ ya na ndị njikwa e-commerce dị ka Prestashop, Shopify, Woocommerce, wdg. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ ndenye ntanetị n'ịntanetị (ọ bụ ezie na ọ nwere atụmatụ enweghị atụmatụ nwere oke) yana ngwa maka ekwentị mkpanaaka.
Amfixisi: ọzọ ọzọ na ndị gara aga iji jikwaa akwụkwọ ọnụahịa gị maka nkasi obi ka ukwuu. Ọ nwere akwụkwọ ọnụahịa ndebiri, ọrụ akpaaka, ọgbọ faịlụ iji chee ụtụ isi, njikwa akaụntụ, mmefu ego, wdg. Atụmatụ ọnụahịa ha sitere na ihe dị ka about 10 ruo ihe dị ka € 50, yana ọrụ ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ nwere ngwa mkpanaka na ọrụ ịntanetị.
Sage Otu: Sage bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama kachasị mma nke ngwanrọ njikwa azụmaahịa. Na nke a, ha ekepụtala ezigbo ngwanrọ ngwanrọ ịgba ụgwọ maka maka freelancers na SMEs. Ga-enweta ihe niile ịchọrọ iji jikwaa akwụkwọ ọnụahịa gị na ịmepụta eserese iji chọpụta ọnọdụ ahụ ma nwee echiche banyere etu azụmahịa si eme. Ọ nwere njikọ ụlọ akụ na-akpaghị aka maka ịkọ ụgwọ na mmefu, yana ohere nke ijikwa ngwaahịa, ikike ọtụtụ ndị ọrụ, wdg. N'ezie, ọ bụghị ọrụ n'efu. O nwere atụmatụ nke .7.5 15 na € 10 kwa ọnwa yana onyinye ya ugbu a (tupu € 20 na respectively XNUMX n'otu n'otu). Site n'ụzọ, Sage nwekwara ngwa mkpanaaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ego ịgba ụgwọ: ihe ị chọrọ ịma
Jorge de loquendo dijo
Ha bụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ? Ebee ka nkwụghachi gị dị? Akwụkwọ ikike? Nchịkọta? Ndewo nke a sitere na Linux abụghị Engadget na isiokwu mgbasa ozi ya
Zaghachi Jorge de loquendo
Afọ ole na ole gara aga, anyị gafere ụlọ ọrụ na Odoo, ọ dị na nchekwa Ubuntu. Ọ bụ n'efu, ọ bụ ezie na e nwere ndị otu parner na-enye ndozi maka ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, anyị goro otu onye ka ọ rụọ nrụnye, nhazi / mmegharị na ndozi. Eziokwu bu na anyi nwere obi uto na mgbanwe a, ihe omume a nwere otutu uzo ma nwee ike site na obere ulo oru. Ọ na-elekwasị anya na weebụ, nke kachasị mee ka m nwee obi abụọ na mbụ, ozugbo arụ ọrụ ha chụpụrụ ha. Ihe kacha ju anyị anya bụ ntụnyere na ngwa azụmaahịa gara aga, nke bụ mmemme n'efu nke ọtụtụ ma ọ bụ karịa na ọnụ ala dị ala na ntụnyere.
Lua 5.4 dị ebe a na ndị a bụ mgbanwe ya na akụkọ
Fedora 33 ga-agbanwe na Vi maka Nano ma kwusi nkwado BIOS